အသက် ၂နှစ်မှ ၄နှစ်အရွယ် ကလေးတွေအတွက် သင့်တော်သော စာဖတ်ခြင်း activities - Chit MayMay
Home Child Entertainment အသက် ၂နှစ်မှ ၄နှစ်အရွယ် ကလေးတွေအတွက် သင့်တော်သော စာဖတ်ခြင်း activities
အသက် ၂နှစ်မှ ၄နှစ်အရွယ် ကလေးတွေအတွက် သင့်တော်သော စာဖတ်ခြင်း activities
စာဖတ်ခြင်းက ကလေးတွေအတွက် ဘာကြောင့်ကောင်းသလဲ?
စာဖတ်ခြင်းနှင့် ပုံပြင်ပြောခြင်းက ကလေးရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုကို နည်းများစွာဖြင့် ကူညီပါတယ်။ ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေက ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် စိတ်ကူးစိတ်သန်းများကို မြှင့်တင်ပေးပါတယ်။ ကလေးကို ဘာသာစကားနဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေအကြောင်း သင်ကြားပေးပြီး စာတတ်မြောက်ရေးအတွက် အုတ်မြစ်တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ စာဖတ်ခြင်းက ကလေးနှင့် မိဘတွေရဲ့သံယောဇဉ် ခိုင်မြဲဖို့ အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အသံကျယ်ကျယ်ဖတ်ခြင်းနှင့် ပုံပြင်တွေ မျှဝေခြင်းက ကလေးနှင့်အတူ မိဘတွေ ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ အရေးအပါဆုံးနှင့် ပျော်စရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးနှင့်အတူ စာဖတ်ဖို့အတွက် ဘာလိုအပ်သလဲ?
ကလေးနှင့်အတူ စာဖတ်ခြင်းက စာအုပ်တွေနဲ့ ပျော်မွေ့စေခြင်းနှင့် အထူးတလည် အချိန်ပေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးကို ဖတ်ပြမယ့် စာအုပ်က ရုပ်ပုံပါတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်ရပါမယ်။
ကား၊ နတ်သမီးပုံပြင်၊ အင်းဆက်ပိုးတွေအကြောင်း (သို့) ပင်လယ်ဓါးပြများ ကဲ့သို့သော ကလေးကြိုက်မယ့် စာအုပ်လေးတွေ၊
lift-the-flap, pop-up, အက္ခရာ၊ ပုံသဏ္ဍာန်၊ အရွယ်အစားနှင့် ရေတွက်ရတဲ့ စာအုပ်တွေ၊
ဟာသပုံပြင်လေးတွေ၊ ရောင်စုံပုံတွေပါတဲ့ ၃၈ဖြာမင်္ဂလာ ပုံပြင်လေးတွေ ။
ကလေးနှင့်အတူ စာဖတ်ချိန်ကို ပျော်စရာကောင်းအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?
ကလေးအား စာအုပ်တစ်အုပ် ရွေးခိုင်းပါ။
ကလေးအား စာအုပ်ကိုင်ပြီး စာမျက်နှာတွေကို ဖွင့်ဖို့ ပြောပါ။
ပုံပြင်ကို အတူတူ ဖတ်ပါ၊ သင်ဖတ်တဲ့ စကားလုံးတိုင်းကို လက်ညိုးထောက်ပြပါ။
စာဖတ်တဲ့အခါ အသံကျယ်ကျယ်ဖြင့် ဖတ်ပြပါ။
မတူညီတဲ့ ဇာတ်ကောင်အတွက် အသံနေအသံထားကို အမျိုးမျိုးပြောင်းပြီး ဖတ်ပြတာက ပျော်စရာကောင်းပါတယ်။
ရုပ်ပုံ နာမည်တွေကို လက်ညိုးထောက်ပြပြီး ကလေးအား မေးပါ။ ရုပ်ပုံတွေအကြောင်း ပြောပြပြီး ကလေးကို မေးခွန်းတွေ မေးပါ။ ဥပမာ- နောက်ပိုင်း ဘာဖြစ်သွားမယ်လို့ သားထင်သလဲ (သို့) ပုံပြင်ထဲက ကလေးလေးက ဘာ့ကြောင့်ပျော်ရွင်သွားတာလဲ?
ကလေးနှင့်အတူ စာဖတ်ခြင်းအတွက် အထွေထွေ အကြံပြုချက်များ
စာဖတ်တဲ့ အလေ့အထကို ပုံမှန်လုပ်ပါ။ နေ့စဉ် အနည်းဆုံး စာအုပ်တစ်အုပ်လောက် မျှဝေဖို့ ကြိုးစားပါ။
ကလေးရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကို လမ်းညွှန်ပေးပါ။ ကလေးက စာဖတ်ချိန်ကို လိုလိုလားလားရှိရင် အရမ်းကောင်းပါတယ်။ တကယ်လို့ သူဟာ စာအုပ်တစ်အုပ်၊ ပုံပြင်တစ်ပုဒ်သာ နားထောင်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း အဆင်ပြေပါတယ်။
ကလေးအာရုံစိုက်နိုင်ဖို့ တီဗွီ (သို့) ရေဒီယိုကို ပိတ်ထားပါ။
စာဖတ်နေစဉ် သင့်ရဲ့ မျက်နှာနဲ့ စာအုပ်ကို သူမြင်နိုင်အောင် နေပါ။
အရွယ်ကြီးတဲ့ ကလေးတွေအတွက် စာဖတ်ခြင်း လှုပ်ရှားမှုများ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်
ကလေးက နည်းနည်းကြီးလာပြီး စာဖတ်တတ်လာတာနှင့်အမျှ မိဘဖတ်ပြတဲ့ စာလုံးများကို လက်ချောင်းလေးနဲ့ လိုက်ထောက်ဖို့ တိုက်တွန်းပါ။ အထူးသဖြင့် အက္ခရာနှင့် စကားလုံးတွေကို ရှာဖွေတာ ကစားနိုင်ပါတယ်။ ပုဒ်ကလေး၊ ပုဒ်မ၊ full stops, exclamation marks နှင့် question marks ကဲ့သို့သော ပုဒ်ဖြတ်၊ ပုဒ်ရပ်များကို ထောက်ပြပါ။
Previous articleကလေးတွေရဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးမထားခြင်း၊ လေးစားမှုနိမ့်ကျခြင်း လက္ခဏာများ
Next articleကလေးတွေခေါင်းကို ဘယ်တော့မှ မလှုပ်ခါသင့်တဲ့ အကြောင်း(Shaken Baby Syndrome) ဆိုတာဘာလဲ?